FMCG - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kuenderera mberi kwekuputika kwemidziyo yenhare mumusika wanhasi kwachinja magungano ekuita bhizinesi. Kufambisa kuve Kuva nemutambo unochinja kukanganisa kuMakambani Ezvinhu Zvevatengi zvakare. Sezvo kufamba uye dhata zvinotyaira shanduko huru padivi revatengi, makambani eCG ari kumanikidzwa kupindura nekugadzirisa maitiro ebhizinesi nekugadzira mitsva.
Kufambisa uye nemidziyo inoenderana irikuita kuti mukana wevatengi uwane dhata pane zvisati zvamboitika mu "nguva chaiyo", zvichimanikidza shanduko huru munzira iyo makambani eCG ari kugadzira, kuvaka, kuchengetedza, kugovera, uye kushambadzira zvigadzirwa. FMCG inobatsira kudzikamisa maitiro ekutengesa nekutenga, semhedzisiro, kuve nechokwadi chekuita mushe kwemabasa ese.
Isu tinopa webhu yakavakirwa mushandisi zvine hushamwari mhinduro kune zvese zvaunoda bhizinesi. Yedu masevhisi anosanganisira akasiyana siyana emafoni app mhinduro dzeMMCG, Retail, uye mamwe akawanda maindasitiri. Tine mwenje wakayerwa, nyore kushandisa GUI yakaburitsa kuchengetedza kwekupedzisira mushandisi ruzivo mupfungwa. Isuwo tinopa Cloud mhinduro uye masevhisi eAWS.
ne Newgenapps, iwe unozobatsirwa kubva ku:
1. Chigadzirwa lifecycle
2.Mapepa ekushandisa masevhisi
4. Performance manejimendi manejimendi
5. Kubatanidzwa neE ERP / CRM kunyorera
6. Ronga kushanyira kwevatengesi
7. Tora kutengesa kutengesa uchishandisa Mobile Apps
8. Cloud mhinduro AWS zvinopihwa